ကရင်လက်နက်ကိုင် ချင်းချင်း ပြန်လည် ပစ်ခတ်မှု မဖြစ်ကြရန် တိုက်တွန်း
KNU_flag ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန် ကရင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များက ဦးစီးပြီး ကရင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အချင်းချင်း ပြန်လည် ပစ်ခတ်မှု မဖြစ်ရန် ဂတိဂ၀တ် တောင်းသည့် ဆွေးနွေးပွဲ တရပ်ကို ယမာန်နေ့၌ ကရင်ပြည်နယ် လှိုင်းပွဲမြို့နယ်ရှိ ကေအန်ယူ တပ်မဟာ (၇)နယ်မြေတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (ကေအန်ယူအဖွဲ့)၊ ကလို့ထူးဘောအဖွဲ့ (ဒီကေဘီအေ)၊ ကရင်ငြိမ်းချမ်း ရေးကောင်စီ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF) နှင့် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ (ဟောင်သရော) အဖွဲ့တို့ ပါဝင်ပြီး မလေးရှားနှင့် သြစ တြေလျားရောက် ကရင်အဖွဲ့၊ ဒုက္ခသည်စခန်းနှင့် စိတ်ဝင်စား သူများအင်အား (၇၀) ခန့် တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
“ အဓိကကတော့ ကရင် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အချင်းချင်း ပြန်လည် မပစ်ခတ်ကြဖို့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေက ဂတိဂ၀တ် တောင်းတဲ့ပွဲပါ။ အဲဒီ အဆိုကိုလည်း ဘယ်အဖွဲ့ကမှ မငြင်းခဲ့ပါဘူး။ လက်ခံကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်မှတ်ထိုးတာ တို့ ဘာတို့တော့ မရှိပါဘူး။ အခုတက်ရောက်လာတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက အလယ်အလတ် ခေါင်းဆောင်တွေဘဲဆိုတော့ နောက်ပွဲတွေမှာဘဲ လက်မှတ်ထိုးနိုင်မဲ့အဆင့် ရောက်မယ် ။ အခုပွဲက ပဏာမပွဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်”ဟု အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့သည့် ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးစောလုံ့လုံက ဆိုပါသည်။
ပါဝင် ဦးဆောင်ကြသော ကရင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း များမှာ ကေအန်ယူမှ အတွင်းရေးမှူး (၁) ပဒိုစောလှငွေ၊ ကလို့ ထူးဘောမှ ဗိုလ်မှူးလုံ့လုံ၊ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီမှ စစ်ထောက် ချုပ် စောယဉ်နု၊ BGF မှရွှေက္ကိုကွပ်ကဲရေး အကြံပေး အဖွဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်ညွန့် နှင့် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူး ဖါးသတားတို့ ဦးဆောင်ပြီး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
KNU_flag_02lokဤဆွေးနွေးပွဲသည်၊ ကရင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အချင်းချင်း ပထမဆုံး အကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပြီး ဦးသုဇနအပါဝင်က ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆရာတော်များနှင့် ကရင်ခရစ်ယာန် ဆရာတော်များက ဦးစီးကျင်းပသည့် ပထမဆုံး အကြိမ်ကရင် လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့တွေ့ဆုံပွဲဖြစ်ပါသည်။
ကရင်လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ အဆင့်မြင့်ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်သော ဆွေးနွေးပွဲကို ထပ်မံကျင်းပ ဦးမည်ဟု သိရပါသည်။ ထိုဆွေးနွေးပွဲ၌ ကရင်လက်နက်ကိုင်အချင်း ပြန်လည် ပစ်ခတ်မှုမဖြစ်ရေး သဘောတူညီချက်ရရန် ကြိုးစားကြမည်ဟု ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်သူများက မူအရသဘောတူကြပါသည်။
ကေအန်ယူသည် ပင်မအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ကျန်သည့်အဖွဲ့များသည်၊ ကေအန်ယူမှ ခွဲထွက်ခဲ့ကြသော အဖွဲ့များဖြစ်ပါသည်။ ဒီကေဘီအေ အဖွဲ့သည် (၁၉၉၄) ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ ဟောင်သရောအဖွဲ့သည် (၁၉၉၆) ခုနှစ်တွင် လည်းကောင်း ကရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီသည်၊ (၂၀၀၇) ခုနှစ်တွင်လည်း ကောင်း၊ အသီးသီး ခွဲထွက်ခဲ့ကြပါသည်။
Posted by MoeMinThu KNU Japan at 4:14
မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား အခွင့်အရေးအတွက် ထိုင်းအ...
ဒီပဲယင်း နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနား မန္တလေး NLD ဦးစီး...
ထိုင်းအတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်နဲ့ ဒေါ်စု မြန်မာ့အရေးဆေ...
ကရင်လက်နက်ကိုင် ချင်းချင်း ပြန်လည် ပစ်ခတ်မှု မဖြ...
ရိုဟင်ဂျာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဟု ပြည်ထောင်စု...
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တင်းမာမူတွေ ပိုဖြစ်နေ2012-05-28...
ဒီမိုကရေစီအရင်လား၊ လျှပ်စစ်မီးအရင်လား Publish...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်း သွားမည် ...
လူထု တောင်းဆိုမှုကို အကြမ်း မဖက်မ...
အင်အားသုံး ဖြေရှင်းမှု ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများ မကျေနပ်ြ...
မြန်မာစစ်တပ် စစ်ရာဇဝတ်မှုများကျူးလွန်နေဟု AI ထုတ်...
မီးလုံလောက်စွာ မပေးနိုင်တော့ကြောင်း အစိုးရထုတ်ပြန်...
ကချင်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ငြိမ်းကော်မတီမှ ဦးအောင်...
ဂျပန် နိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း ၄၆ နှစ်တွင် ပထမဦးဆုံ...
ဦးအောင်မင်းနှင့်တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်း (ရုပ်သံ) DVB...
ဂျပန်နိုင်ငံ (JICA) အဖွဲ့က ဒီချုပ...
DKBA က မူးရစ်ဆေးဝါး ကင်းစင်ရေး လူ...
ကေအဲန်ယူ တောင်ငူခရိုင် လူထုရှင်းလင်းပွဲသို့ မြန်မာ...
သေမင်းတမန်ရထားလမ်း ပြန်ဖောက်မည်ဟု ဝန်ကြီးပြောဆိုကေ...
အစိုးရ စစ်တပ်မှ အုပ်စုဖွဲ့ အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး ရိုက...
KKO ထုတ်ပြန်ချက် KKO_Letterhead-1-1-_Anti-drug_ v...
အာဇာနည်ကုန်း သတင်း ဦးကျော်ဆန်းမှာ တာဝန်ရှိသလားBy ...
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ17 မေ 2012နိ...
ဇေကမ္ဘာ မြေသိမ်းမှု ပဋိပက္ခ (ရုပ်/သံ)မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်...
တိုင်းရင်းသား ငြိမ်းချမ်းရေး အပစ်အခတ် ရပ်ရုံနဲ့ ...
အိန္ဒိယရောက် မြန်မာ ဒုက္ခသည် ရေရှည် နေထိုင်ခွင့် ဗ...
သေမင်းတမန် ရထားလမ်း ပြုပြင်ရေး အစီစဉ် စတော့မည်ဟု...
ပိတ်လှောင် ခိုင်းစေခံရသည့် မြန်မာအလုပ်သမား ၁၅၀ ခ...
The funeral of KNLA G2 Saw Moe Pyu (ရုပ်သံ) ကွယ်ကလ...
မြန်မာစစ်တပ်မှ ကချင်နှင့် ပလောင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့...
မြောက်ကိုရီးယား နဲ့ မပတ်သက်ရင် မြန်မာကို တောင်ကိုရ...
မြောက်ကိုရီးယားနှင့် နျူကလီးယားကိစ္စ ဦးသိန်းစိန်...
ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေး မူးယစ်ဆေးနှင့် မပတ်သက်ဟု ထိုင်...
KKO letter of Condolence to Col. Saw Moe Pyu KKO_l...
VOA Burmese TV Magazine - May 2nd Week Program
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကောင်စီ အထူးအစည်...
ပြည်ပရောက်မြန်မာများကို ဦးသိန်းစိန် ဖိတ်ခေါ်2012-0...
KNLA ဒုတိယတန်း စစ်ဦးစီးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးမိုးဖြူ ကွ...
ကလိုထူးဘော ကရင် အစည်းအရုံး ထုတ်ပြန်ချက် ၃/၂၀၁၂ ph...
မြန်မာ့အပြောင်းအလဲ စိတ်မချရသေး ...
ဇေကမ္ဘာသိမ်းထားတဲ့ ယာမြေပေါ် ရွှေနံ့သာ လယ်သမားများ ...
ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွှေးမှ ဒုတိယအကြိမ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွ...
အစိုးရနဲ့ ကေအိုင်အေ တိုက်ပွဲပြင်းထန် ...
ဗိုလ်နှုတ်ခမ်းမွေးကို ဖမ်းပေးရန် ထိုင်းက မြန်မာအစ...
DKBA နဲ့ အစိုးရကြား တင်းမာမှု KNU ကြားဝင် စေ့စပ်ဖို...
ဖြိုးဝေအောင်ကို သေဒဏ်ချမှတ် ...
ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး သတင်း ဂျာနယ်တွေမှာ ရေးသားဖော်ြ...
ထိုင်း​-မြန်မာနယ်စပ် ဂိတ်အချို့​ကို ဒီ​ကေဘီ​အေ ပ...
သော့ခလောက်ကြီး တန်းလန်းနဲ့ပဲလား ပြီးတော့ ရှေ့ဆက်...
လူကုန်ကူးမှုနှင့် ခေတ်သစ်ကျေးကျွန်စနစ် (ရုပ်သံ)
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (ဂျပန်) ပုံမှန် လပတ် အစည်...
ဒီကေဘီအေ ခေါင်းဆောင်ကို လွဲပြောင်းပေးဖို့ မြန်မာ...
SSA မြောက်ပိုင်း နယ်မြေထဲ အစိုးရစစ်ကြောင်း အလုံး...
ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်ချမှု ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုက်နိုင်...
“ပြည်တွင်းစစ် အလိုမရှိဘူး”By featured, ဧရာဝတီ on M...
ထိုင်း၏ စွပ်စွဲချက်အကြောင်း DKBA ထပ်ရှင်းမည်၁၀ ရ...
NLD အမတ်များ လွှတ်တော်တွင် ကျမ်းကျိန် ၀၂ ​မေလ ၂၀၁၂။...
ထိုင်းဗိုလ်ချုပ်တွေပေးတဲ့ သင်္ခန်းစာ ...
ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလဘွယ် သတင်းစာရှင်းလင်း2012-05-01...
ခနောက်စိမ်း တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း KNU ရပ်ဆိုင်းမည် ...
UNFC တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဒေဗစ်သာကဘော ...
ဒေါ်စုနဲ့ NLD ကျမ်းကျိန် လွှတ်တော်တက်ဖို့ဆုံးဖြတ် ...